Umjelo wamanzi weplastiki we-PVC-U ovuthayo kumbhobho othe ngqo
Umbhobho we-PVC usetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso nakwizakhiwo zoluntu, kubandakanya umjelo wamanzi ngaphakathi nangaphandle, iprojekthi yombhobho welindle, inkqubo yokunkcenkceshela kwezolimo, umjelo wamachiza, ilindle, ikwalungele umbhobho wokungenisa umoya kunye nombhobho wokuhambisa amanzi, njl.
umsele wamanzi weplastiki wePVC-U ngokuthe ngqo
Amacandelo okufaka isicelo: ulwelo (i-liquid, igesi, umgubo owomileyo, izinto kunye nezinye izinto zosasazo) imibhobho kwi-petroleum, imichiza, i-elektroniki, ukwakha iinqanawa, ukwenza iphepha, i-LNG, ishishini lezomkhosi, isinyithi, ubonelelo lwamanzi kunye nomsele, amayeza, ubunjineli bendalo kunye namanye amashishini okanye Iiprojekthi zobunjineli] ASTM A321、I-ASTM A778、I-ASTM A789、I-ASTM A790、Ukucaciswa kwe-ASTM A358 kunye nobukhulu zezi zilandelayo（Imilinganiselo yokulinganisa idibana kuphela ne-ASME B36.19M、B36.01M）
umsele wamanzi weplastiki we-PVC ovuthayo
ibhokisi yebhokisi yekhadibhodi yesakhelo sokuqala sefayibha yomoya
Icebo lokucoca ulwelo lisebenzisa ifayibha entsha eyenziweyo kunye neglasi yefayibha njengezinto zokucoca ulwelo, emva kokusonga, inokusebenza okuphezulu kokucoca, amandla okuphatha uthuli, ukumelana okuphantsi kunye nezinye izinto. Ukusetyenziswa ngokubanzi kumatshini wokucoca umoya opholileyo womoya ococekileyo, inkqubo yokuhlanjululwa komoya kunye nokutshiza inkqubo yokuhambisa umoya, inokusetyenziswa njengesihluzi sangaphambi kokucoca ulwelo oluphakathi ukwandisa ubomi bayo benkonzo. Ngokubanzi iqondo lobushushu lokusetyenziswa kwalo lingaphantsi kwama-93 degrees.
Isakhelo se-aluminium esinokutshintshwa esinokutshintshwa
Icebo lokucoca ulwelo lisebenzisa ifayibha entsha yentsimbi eyenziwayo njengesixhobo sokucoca ulwelo, emva kokubumba, sinokusebenza okuphezulu kokuhluza, amandla amakhulu okubamba uthuli, kunye nokumelana okuphantsi ngesihluzi esinokutshintsha, iindleko zokusebenza eziphantsi kunye nezinye izinto.
Uhlobo lwetanki olungahlukanisiyo lokucoca ulwelo ngokufanelekileyo
l Akukho sihluzo sokuvuza esinokufakwa ngenxa yokusetyenziswa kwemathiriyeli ekhethekileyo yokutywinwa kwejel.
ulwahlulo olunombono wokusebenza okuphezulu kwekhono lokucoca ulwelo lwe-HEPA lwegumbi elicocekileyo elenza amayeza
Icebo lokucoca lamkela iphepha elicwecwe ngefayibha yeglasi njengempahla eluhlaza, kunye nephepha elingasetyenziswanga njengebhodi yokwahlula, eyenza ibhokisi enesitayile, ialuminiyam ingxubevange kunye neglu. Le mveliso inempawu zokuhluza okuphezulu, ukunganyangeki okuphantsi, amandla amakhulu okubamba uthuli kunye nexabiso lezoqoqosho. Isetyenziswa ngokubanzi ekucocweni komoya kokuphela kwenkqubo yokupholisa umoya, inkqubo yokuhlanjululwa komoya kunye nokutshiza inkqubo yokuhambisa umoya. Ngokubanzi, ubushushu bemo engaphantsi kwama-60 degrees. Izinto zomda yibhokisi ebunjiweyo kunye nesakhelo sealuminium.
Icebo lokucoca ulwelo olumiliselwe V
Uyilo olumilise i-V olunesihluzi esincinci se-mini, linendawo yokuhluza ngakumbi kunecebo lokucoca lendabuko. Indawo enkulu yokuhluza inokubamba umthamo omkhulu womoya, igcine ilahleko esezantsi kunye nokwandisa ubomi beenkonzo kwifilter. Isixhobo sokucoca: isixhobo sokucoca samkela ifayibha yeglasi egqwesileyo ehlanganiselwe kwisakhelo ngokusombulula iphepha lokucoca ulwelo lihlukaniswe kukuncamathela okushushu.
indawo yokusebenza ngobuchule obuphezulu kunye nokwahlulahlula umoya awusahluleli
Isetyenziswa ngokubanzi kunikezelo lomoya ekupheleni kwesityalo esicocekileyo, njenge: amayeza, unyango, ukutya, i-elektroniki, ukutyabeka ngokuchanekileyo kunye namanye amashishini.
Iimveliso zisebenzisa ucinezelo loomatshini, kwaye izinto zebhokisi yi-GB ebandayo eqengqwe ipleyiti.
Unyango umphezulu Ibhokisi isebenzisa phosphating sokutshiza, kunye nokumelana olomeleleyo.
FL series lobushushu eliphezulu lokucoca ulwelo usebenzisa ultrafine iglasi ifayibha njengoko iphepha lokucoca ulwelo, ngefoyile ye-aluminiyam njengoko umahluli, kunye insimbi njengoko isakhelo. Itywinwe kwaye yaxhotyiswa ngerabha ephezulu yokungenisa ngaphakathi. Icebo lokucoca ulwelo ngalinye ludlulisile kuvavanyo olungqongqo kunye nokusebenza okuphezulu kokucoca ulwelo, ukumelana okuphantsi, umthamo omkhulu wokubamba uthuli, kunye nokumelana nobushushu obuphezulu. Ingakumbi izixhobo zokucoca umoya ezinobushushu obuphezulu kunye neenkqubo ezifuna imigca yemveliso yokutyabeka ephezulu njengokuma
Ulwahlulo oluphakathi lokucoca ulwelo
Icebo lokucoca ulwelo L-ezimilise ukwahlula wavy. Emva kokuyila, inokusebenza kokucoca okuphezulu, amandla amakhulu okubamba uthuli, ivolumu yomoya ephezulu kunye nezinye izinto. Isetyenziswa ngokubanzi ekucocweni komoya kokuphela kwenkqubo yokupholisa umoya, inkqubo yokuhlanjululwa komoya kunye nokutshiza inkqubo yokuhambisa umoya. Iqondo lokushisa ngokubanzi lokusetyenziswa lingaphantsi kwama-80 degrees. Izinto ezinomda zenziwe ngesakhelo esenziwe ngesinyithi, isakhelo sealuminium, kunye nesakhelo sensimbi engenasici.